Isku bedel sawirada vector - Gacmo galin
Ogast, 2009 cadastre, Microstation-Bentley
Waqtigaan ka hor, miisaska tirakoobka ayaa ahaa soo saarka si loo soo koobo khariidado la daabacay, ka dibna wuxuu keenay tarjumaha, inkastoo shaqada aysan hirgalin kaliya khariidadaha la isku sawiray laakiin kuwa kale oo loo rogay sawir ama pdf iyo inaanaan haysan qaabka vector.
Nidaamka aan doonayo inaan muujiyo wuxuu isticmaalayaa Microstation Descartes, laakiin isku mid ayaa loo samayn karaa barnaamij kasta oo kale: Design Auto Ress (Ka hor inta aan Laheyn CAD) ArcScan, GIS kala cayncayn ah (Qalabka Ganacsiga), waxaan xusuustaa in muddo dheer aan la sameeyay Corel Draw.
Waxaa jira dhowr arrimood oo saameyn ku yeesha in ay suurogal noqoto in la sameeyo iskudhafid la'aan iyada oo aan lahayn madax xanuun yar. Qaar ka mid ah habka muuqaalka, png ama tiff waxay ku siin doonaan natiijooyin fiican, halka jpg uu ku dhow yahay wax aan suurtagal ahayn; sidoo kale saamaysaa xal in la dhoofiyo, sida haddii la badaley ka module daabaco ama la dhoofiyo si caadi ah ayaa miisaan la xiriira size warqada, weyn ee size warqad aad ka fili karto xal fiican ama ugu yaraan si fiican xaaladaha ka badan shaashadda daabacaadda fudud.
Tusaalaha aan isticmaalayo waa 1: Khariidad 1,000 oo laga soo dhoofiyay Qalabka Microstation-ka, xaashida 24 "x36", qaabka tifaftirka.
Khariidad sidan oo kale ah waa mid sahlan in la daba galo sababtoo ah waxa uu leeyahay iskudhafka. Waxaan dhibcaha ku soo aruuriyay isticmaalka amarka "meel dhibic ah", Oo soo galaya keyin isku-duwaha foomka "x = X-koordinate, Y-koordinate", Kuwani waa dhibco buluug ah oo sawirka hoose.
Kadibna waxaan ugu yeeray sawirka tixraaca, in yar oo ka baxsan qodobadaas. Kadibna waxaan isku dhigayaa isku mid ah midabyo kala duwan, iskudubarid khadadka cagaaran, marwalba adigoo isticmaalaya dhumuc baaxad leh si aad u muuqato. Ugu dambeyntiina waxaan isticmaalay "edit, warp" oo ka yimid maamulaha raajada, waxaan ku dabaqay afarta qodob ee koontaroolka sida ku cad shaxanka. Hada waa inaad awood u yeelatid in aad u baahatid inaad cabirto.
Inkasta oo Microstation V8i waxay taageertaa soo wicida faylka pdf ee sawir ahaan iyo tan waxaa lagu dhejin karaa nidaamkii hore, nidaamka farsamaynta ma khuseeyo sababtoo ah waxay u baahan tahay inaad haysatid xuquuqda qorista. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la qaado, oo u kaydso sawir (badhan sax ah, badbaadi sida...).
Waxaan isticmaalaa Microstation Descartes V8i. Inkastoo tani ay la shaqeyneyso mid la mid ah kii hore.
Dhaqdhaqaaq qalabka Descartes. Sidaa darted waxaan sameynaa "qalab, raajo, beddelaad raajo"Taasi waxay ina tusinaysaa bar oo ka kooban qalabka aasaasiga ah ee sawir-qaadidda.
Aynu jimicsiga ku sameyno tufaax 15 si uu u sharaxo qoraallo waxa la qabanayo:
Xulo maaskarada. Astaanta koowaad waxay u oggolaaneysaa in ay abuurto maaskaro, oo ku saleysan shuruudaha, kiiskan waxaan isticmaali doonaa midabada, isagoo tilmaamaya inaan doonayo inaan ku daro liinta mashiinka. Waa inaad la xiriirtaa xariiqda xariiqda, oo dooro sanduuq ku yaal aagga uu midabkiisu u muuqdo mid toos ah. Si loo saxo midabka aad rabto inaad muujiso maaskarada, waxaa lagu sameeyaa ikhtiyaarka "wadahadal maskaxda"Xaaladayda ayaan doortay cagaaran. Waxa kale oo suurtogal ah in la abuuro maaskaro dhawr ah iyo badbaadinta qaabka qaabka .msk
Isla markiiba loo doorto maaskiga ayaa isbeddelaya midabka cagaarka ah (cagaaran). Waxaad sidoo kale ku dari kartaa midabo badan oo isku mid ah, ama iskugeyn karaan.
Wareega wareegyada. Aynu dhisno wareegyada lagu arkay lambarrada tufaaxa, taas awgeed waxaan codsanaa raadiyaha kadibna kaliya ku taabasho xariiq kasta ee wareegyada. Aad u fudud, waxaan isticmaalay midab madenta ah iyo dhumucdiisuna ku filan tahay arrimaha aragga. Ugu badnaan waa in la tilmaamaa, tani waxaa lagu sameeyaa adigoo qiyaasaya masaafada oo ka sarreysa xariiqda xariiqda sawirka. Si xakam leh u xakamaynta, waa ku haboon tahay inuu ku baro si uu u tirtiro muuqaalka sawirka.
Xaqiijinta. Si aad uga fogaato inaad ka dhigto waxyaabo badan oo sababtoo ah pixilated, waa arrin caadi ah. Tusaale ahaan waa mid aan caadi ahayn, fiiri sida laynka ay u saameeyaan pixelated.
Wareega xuduudaha leh topolojiga. Hadda waxaan rabaa in aan digitized xuduudaha, haddii aan maskaxda si gooni gooni u ah xuduudaha apple waxaan lahaan lahaa dhibaatada ah in aysan laheyn nadiifinta moolojiga ah ee noodhka xuduudaha gudaha. Tani waxaan ku darayaa midabka casaan iyo midabka madow maaskarada, ka dibna waxaan si gaar ah u taabanayaa qaybaha. Calaamaduhu waa in dhammaantood la dhigo midabka maaskarada, ka dibna kaliya taabashada adigoo isticmaalaya ikhtiyaar "khadadka bedelka"
Waa fududahay, taasi waa. Fiiri faahfaahinta dheeraadka ah, in noodhada la aqoonsaday iyadoo lagu hayo isugeynta is-bedelka ee meelaha wax lagu dhejiyo, nodes waxaa lagu keydin karaa faylka .nod. Waxaad dooran kartaa midabka ama isbeddelka heerkulka markaad rabto, tani waa waxa aan sameeyey si aan u kala soocno xuduudka appka xitaa iyadoo la shaqeyneysa maaskaro.
Bedel qoraalka. Tan waxaa jira qalabyo kale, taas oo kuu oggolaanaysa inaad dooratid siman, isbedel, qoraalo badan, iyo kuwo kale, adiga oo isticmaalaya OCR. Xaqiiqda waxaa jira inay bedelayaan unugyada (unugyada).
Doorashooyinka kale ee vector. Marka masraxa la isticmaalo, waxaa ka mid ah hawlaha lagu dabaqi karo:
4. U beddel qadadka si gooni ah
5. Ku bedel dhamaan aagga la qabadsiiyay ee qaab dhismeedka
6. Isku bedel dhamaan waxyaabaha kuxiran ee khariidada
7. Dhisidda Contour Contours, waxay ubaahantahay in ay ku jiraan faylka 3D.
8. Qaab dhismayaasha goobaha
9. Siyaabo fududeeyayaasha ah, tani waxay u taagan tahay xarriiqda xariiqda ee leh qaybo farabadan
Xukunka. I qiyaasay meel fog ka soo xagga hore ee tirada hantida 2 ah, oo i siiyey mitir 28.9611, asalka ahaa 29.00, vectorizarlo socod siin lahaa isla laakiin gaabis ah, miiska digitizing ayaa ka xun lahaa. Tani waxay ka dhigan tahay saxda ah waa lagama maarmaan in la tixgeliyo dhowr arrimood, sida tayada
d iskaanka, haddii sheet ma daciif ah, qiyaasta map-ka, tayada pixelated iyo gaar ahaan georeferencing ee hoosaadka 2 of this post.
Haddii aad haysato laba sawir oo midab leh, ama aad ku jirto xaalad degdeg ah, waxaa suurtogal ah inaad sameysid ballaadhan ballaaran, inkastoo arrintani ay tahay inaad qaadato qaar ka mid ah dhinacyada:
Haddii khariidadu ay ka kooban tahay xuduudaha kaliya, marka la sameeyo tijaabooyinka caadiga ah waxaa lagu sameyn karaa hab fudud.
Haddii khariidadu leedahay qoraallo, waxa habboon in la badalo kuwan marka hore, ka dibna leh qalabka nadiifinta sawiraha ka saaro haraaga wasakhda
Haddii iskaanka in midabka, la scan la aqbali karo ah, sida 1 sheet map a: 50,000, aad samayn karto midabka, iyo samaynta waji leh magacyo u faa'iido badan (khadadka dusha, dhismayaasha, waddooyinka, warshadda, iwm) si aad u codsato sidaas yunifoomka sawirrada kala duwan.
Markaad haysato xaashiyo joogto ah, waxaa habboon in loo sheego labadaba, sameynta isbedel suurta gal ah adoo isticmaalaya iskudhafid iyo iskudubarid leh xaashiyo kala duwan oo la xushay.
Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo kormeerka dambe, gaar ahaan qaybaha kala duwan iyo meelaha u dhaw meelaha ugu dhow.
Post Previous«Previous gvSIG: Gajes of this iyo xirfadaha kale
Post Next Ingeosolum wuxuu soo saaraa wargeysNext »
Hal Jawaab u Jawaabi "Ku bedel sawirada vector"
Haa, waxaan rajeynayaa in ay la shaqeyso 8.5, maxaa yeelay waxay noqon doontaa mid aad u muhiim ah.